အများသိနိုင် ပြင်ဆင်နိုင် ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်ရန် ရှယ်ပေးပါ…. – SainPwar
SainPwar > local news > အများသိနိုင် ပြင်ဆင်နိုင် ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်ရန် ရှယ်ပေးပါ….
အများသိနိုင် ပြင်ဆင်နိုင် ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်ရန် ရှယ်ပေးပါ….
မန္တလေးတိုင်း စက်မှုမြို့သစ်သင်ပန်းကုန်းထဲ ၁၂၂ လမ်းနဲ့ ‌၁၂၃ လမ်းကြား အရှေ့အနောက်လမ်း ၄၉ လမ်းမှ၅၃ လမ်းအထိ ဧရိယာအတွင်း လမ်းကွက်များချရန် ဂရန်/စလစ်များမှအပ အာမို ကုမ္မဏီမှ ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်သဖြင့်အကုန်ဖျက်ဆီးနေပါသည်။
အထက်ပါဧရိယာမှာ လမ်း ၅၀ /၅၁ /၅၂ လမ်း‌ဧရိယာရှေ့နောက်နဲ့ ချောင်းဘေးကပ်ရက် အကုန်ပါမှာမို့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေရှိရင်
ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်ရန်နဲ့ အိမ်‌ဟောင်းကိုရောင်းလို့ရတာဖြုတ်ရောင်း၊ ရွှေ့လို့ရတာရွှေ့ နေရာရှာတန်သည်ရှာ ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ပြီး နစ်နာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်‌ရန် လေးစားစွာသတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၄၉ အရှေ့( ဋ) ရပ်ကွက်သစ်နဲ့ ဇီးအုပ်ရွာမများနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့တော့သိရ။
Edit အများသိနိုင် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ရှယ်ပေးပါ။
မန်တလေးတိုငျး စကျမှုမွို့သဈသငျပနျးကုနျးထဲ ၁၂၂ လမျးနဲ့ ‌၁၂၃ လမျးကွား အရှေ့အနောကျလမျး ၄၉ လမျးမှ၅၃ လမျးအထိ ဧရိယာအတှငျး လမျးကှကျမြားခရြနျ ဂရနျ/စလဈမြားမှအပ အာမို ကုမ်မဏီမှ ဝယျယူထားပွီးဖွဈသဖွင့ျအကုနျဖကြျဆီးနပေါသညျ။
အထကျပါဧရိယာမှာ လမျး ၅၀ /၅၁ /၅၂ လမျး‌ဧရိယာရှေ့နောကျနဲ့ ခြောငျးဘေးကပျရကျ အကုနျပါမှာမို့ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှရှေိရငျ
ကွိုတငျရှှေ့ပွောငျးထားနိုငျရနျနဲ့ အိမျ‌ဟောငျးကိုရောငျးလို့ရတာဖွုတျရောငျး၊ ရှှေ့လို့ရတာရှှေ့ နရောရှာတနျသညျရှာ ကွိုတငျလုပျဆောငျပွီး နဈနာမှုအနညျးဆုံးဖွဈအောငျ ကွိုတငျစီစဉျနိုငျ‌ရနျ လေးစားစှာသတိပေးအပျပါတယျခငျဗြာ။
၄၉ အရှေ့( ဋ) ရပျကှကျသဈနဲ့ ဇီးအုပျရှာမမြားနဲ့ မသကျဆိုငျဘူးလို့တော့သိရ။
Edit အမြားသိနိုငျ ပွငျဆငျနိုငျရနျ ရှယျပေးပါ။
Previous Article သရက်ကင်ရောင်းတဲ့ ဂျမ်းတောလေးမေမေရဲ့ ဈာပနမြင်ကွင်းနှင့် အငယ်ဆုံး နို့စို့လေးရဲ့ မိခင်နှင့်သား လိပ်ပြာခွဲခြင်း၏ ရင့်နင့်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်း
Next Article ပျားရည်နှင့် သံပုရာသီးတို့ သောက်သုံးခြင်းမှ ရရှိနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုချက် (၇) ချက်က်ုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်